Rayson | akwa akwa na igbe mmiri
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaahịa zuru oke zuru oke nke onye na-ebubata nri. Oke matring matragement zuru oke ngwaahịa a na-egosipụta iguzogide. Ọ nwere ike iguzonye nnyefe na ike siri ike ma agaghị emebi ya n'ọnọdụ siri ike. A na-emepụta ihe zuru ezu tupu mmepụta iji hụ na a na-emepụta rayson nke ọma ma n'ụzọ ziri ezi. Ọnụ ego nke oge opupu ihe ubi zuru oke A ma ama na aha ọma nke Rayson opupu ihe ubi matarasị na ahịa na-arị elu.
Site na ihe ohuru ohuru na teknụzụ na ụzụ na teknụzụ na-eme ka ọ pụta ìhè ma na-arapara na mmepe nke teknụzụ. Igwe matgedos na-agba mmiri ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ngwaahịa anyị matrasị na ntanetị, na-anabata ngwaahịa anyị nke ọma na mmiri ọkụ na oyi ma na-ejide mgbe oge.
1. Ebe a na-edebe ihe dị na ya dị larịị na ime ụlọ gị, jiri nwayọ dọta mado ma tinye ya n'elu akwa gị. 2.Cee nke a na-egbutu akpa ahụ na mkpa iji jide n'aka na ị gaghị egbutu plastik n'ime ma ọ bụ matraasi, adala mma mma. 3. Hapụ matrat-a matrasị na akwa gị n'elu akwa gị. 5.Allow 24 awa maka ọhụrụ gị matarasị ka n'ụzọ zuru ezu na-agbasa.